प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि प्रचण्ड तयार हुने कि नहुने भन्दै उनले आफ्नो जवाफी प्रस्तावमार्फत प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रचण्डले यसअघि ल्याएको प्रस्तावमाथि लिखित जवाफ दिन ओलीले ल्याएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?’
उनले आगामी महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी स्थायी समिति बैठकमै गराइसकेको बताउँदै नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल नगर्न प्रचण्डलाई सचेत समेत गराएका छन् ।
‘यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नु पर्ने हो ? तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ– चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ?’, ओलीले भनेका छन्, ‘के कमरेडहरुलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरुको विवेकमाथि विश्वास छैन? दुई वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहने छ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ । के कमरेडहरुमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने, फेरि किन सधैभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताहरुको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?’
ओलीले प्रचण्डले आफूमाथि ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । यस्तै आफूमाथि ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, ‘विदेश मामला र कुटनीतिमा ‘अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पु¥याएको’, ‘सङ्घीयता विरोधी’, आदि फौजदारी प्रकृतिका सङ्गीन र झुठा लाञ्छनाहरु प्रच्ण्डले प्रस्तावमा लगाएको प्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘कहिलेकाँही आफै छक्क पर्छु, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो कस्तो सङ्क्रामक रोग हो, जसले सामान्य असहमतिलाई पनि जबर्जस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउँछ ? यी यति अराजनीतिक आरोपहरु हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु ’, ओलीले भनेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बहुमतीय आधारमा महाधिवेशन गर्न तयार हुनुहुन्छ प्रश्न गरेका छन्।
शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। सहमतिका आधारमा एकता गरिएको र बहुमत र अल्पमतमा लाग्ने हो भने प्रचण्ड नै अप्ठ्यारोमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरका छन्।
‘आज तपाईले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ। आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरुको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नु भएको छ। कित्ताकाट गर्न थाल्नु भएको छ’, ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साविक एमालेको एकजना भए पनि बढी सङ्ख्या छ। बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो?’
अध्यक्ष ओलीले बहुमत र अल्पमतमा लाग्ने भए विधान संशोधन गर्न र एकताको आधार फेर्न आग्रह गरेका छन्। ‘ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौं’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्तर्धामा विजय हासिल गरै प्राप्त गरेको हुँ। महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाई तयार हो? म त तयारै छु।’
‘महाधिवेशनबाट निवाचित अध्यक्षका रुपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएछ। त्यतिमात्र तर्क गरौँ, जतिमा अडिन सकिन्छ। यो तर्क गरिरहँदा तपाईं यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नर्बिसनुस्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर छलफल गर्न मंसिर ३ गते बैठक बसेको थियो तर सो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि गम्भीर खालका आरोप लगाएकोले त्यसको एक÷एक जवाफसहित दश दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न समय माग गरेपछि आज सचिवालयको बैठक बसेको हो। आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पनि ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नेकपाको एकता महाधिवेशन यही चैत २५ देखि ३० सम्म गर्ने तय भएको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी वादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो। एकता भएको दुईवर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो।